Maxay tahay sunta la qaadsiiyay basaaskii Ruushka? - BBC News Somali
Maxay tahay sunta la qaadsiiyay basaaskii Ruushka?
13 Maarso 2018
Image caption Sergei Skripal iyo gabadhiisa Yulia ayaa aad ula il daran sunta saaqday 4-tii bishan Maarso
Ra'isulwasaaraha Britain Theresa ayaa maaddadan ku sheegtay nooc lagu magacaabo Novichok oo ah magaca wadareed loo yaqaano noocyo kala duwan oo kiimiko ah.
Walxo ka mid ah maddada lagu sumeeyay basaas hore oo Ruushka u dhashay oo la helay
Kiimiko sun ah oo lagu weeraray Xalab
Aroosad sun ay u qooshtay ninkeeda ku dishay 15 qof oo reer xididkeeda ah
Lix qof oo lagu dhaawacay bariga London
"Waxa ay tani ka halis badantahay , kana casrisantahay maaddada VX, waana adagtahay in la ogaado" ayuu yiri Prof Gary Stephens oo tirsan jaamacadda Reading.
Qaar ka mid ah maaddooyinkan waxaa loo kaydiyaa sida 'walxo kala soocan', kuwaas oo marka la'isku daro samaynaya falgal, kadibna noqonaya maaddo sun ah.
"Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee loosoo saaro maaddadan ayaa ah in waxyaabaha ay ka koobantahay aysan ka mid ahayd walxaha mamnuuca ah, taas oo ka dhigan in qofka uu safrin karo, geyna karo meeshii loogu talogalay isaga oo aysan wax halis ah kasoo gaarin, hadhoowna la'isku qasi doono marka la adeegsan rabo" ayuu yiri Prof Stephens oo sii hadlayay.